နေ့: မေလ 18 2013
Hafiz မိန်းကလေးငယ်များ Tekmanl ခံစားခဲ့ရ cable ကိုကားတစ်စီးကိုခံစား
Erzurum Tekman ၏ခရိုင်အတွင်းရှိမိန်းကလေးငယ်များကိုရမ်ကျမ်းသင်တန်းများအတွက်လေ့လာနေ Tekmanl အဆိုပါ Mem မိန်းကလေးငယ်များ 150 ကျောင်းသားများPalandökenနှင်းလျှောစီး LIFT ရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလခရီးသွားလုပ်ငန်းစင်တာပျော်မွေ့သွားရောက်ခဲ့ပြီးနေထိုင်ခဲ့တယ်။ မိန်းကလေးကျောင်းသားများကို၎င်းတို့၏ဘဝအသက်တာ၌ပထမဦးဆုံးအကြိမ်တစ်ကေဘယ်လ်ကြိုးကားကိုစီးနင်း၏စိတ်လှုပ်ရှားခံစားခဲ့ရသညျ။ ခရိုင် Mufti ချိတ်ဆက်ထားပြီး Tekman [ပို ... ]
အုပ်ချုပ်ရေးမှူးAltıparmakနောက်ဆုံး cable ကိုကားတစ်စီးလက်ဆောင်တစ်ခု
အခြေခံအုတ်မြစ် Tunektepe ကေဘယ်လ်ကားစီမံကိန်းအပေါ်အခြေခံကေဘယ်လ်ကြိုးကားကိုÖztürk devredecek.turiz ပယ်ပြီးနောက်အသစ်ကအုပ်ချုပ်ရေးမှူး Sebahattin ၏ Antalya အုပ်ချုပ်ရေးမှူး Ahmet Altıparmakတာဝန်ချန်ထားမည်ကိုတင်သောကိုအလွန်အထောက်အကူဖြစ်စေပါလိမ့်မယ်ပြီးနောက် Erzurum, Antalya အုပ်ချုပ်ရေးမှူးAltıparmakတာဝန်တာဝန်ပေးအပ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးAltıparmakနောက်ဆုံးလက်ဆောင်တစ်ခုကေဘယ်လ်ကား [ပို ... ]
Eskişehirdeပစ်မှတ်ရထားစနစ်များနိုင်ငံတကာ Center က Be ရန်
ခေါင်းဆောင်မှုရထားသတ်မှတ်မည် (RSK) အရဖွဲ့စည်းတည်ထောင်စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များEskişehirကုန်သည်ကြီးများအသင်း (ESO) Be ရန်Eskişehirdeပစ်မှတ်ရထားစနစ်များနိုင်ငံတကာ Center က၎င်း၏သာမန်အထွေထွေညီလာခံကျင်းပခဲ့သည်။ တစ်ဦးအလားအလာအခြေခံပေါ်မှာညီလာခံ ESO ယခုအချိန်အထိသဘောပေါက်သီးပြွတ်၏ခန်းမနှင့်လုပ်သောအရာတို့ကိုကျင်းပခဲ့သောအစည်းအဝေးတွင် [ပို ... ]
ပထမဦးဆုံးပြည်တွင်းလမ်းရထား Silkworm Bursa မြို့စတုရန်းအတွက်နိုင်ငံသားများမှမိတ်ဆက်ခဲ့သည်
ပထမဦးဆုံးပြည်တွင်း silkworm လမ်းရထားအဆိုပါရှေ့ပြေးပုံစံမြို့စတုရန်းအတွက်နိုင်ငံသားများမှစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်တူရကီ၏ပထမဦးဆုံးတိုင်းရင်းသားလမ်းရထား "Silkworm" ၏ခေါင်းဆောင်မှုကိုကိုင်ပြီးအားဖြင့်ထုတ်လုပ် Bursa မြို့ရင်ပြင် Durmazlar ၏ Bursa တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်၏နိုင်ငံသားများမှမိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်။ Silkworm, မြို့လယ်မှာမော်တော်ယာဉ်ဆူညံသံ, အအိပ်ဇောဓာတ်ငွေ့ညစ်ညမ်းမှု [ပို ... ]
ပိုများသောအလင်းရထားစနစ် | Kayseri
အခုဆိုရင်အမှန်တကယ်သဘောပေါက်ပိုမိုအလင်းရထားစနစ်။ မတ်လအားဖြင့်တစ်လလျှင်ပို့ဆောင် 20132သန်းခရီးသည်။ ဒီနှစ်မှာတော့ 24 နှုန်းသန်းခရီးသည်ကိုဆိုလိုသည်။ လေးနှစ်နှင့်ဤကဲ့သို့သောသုံးငါးခုတက်၏ပျမ်းမျှ။ ရဲ့,2ကြည့်ရှုကြပါစို့။ [ပို ... ]
အင်ဒိုနီးရှားရထားထဲမှာအမြိုးသမီးမြားအဘို့အခွဲဝေကြောင့်အင်ဒိုနီးရှားရှိဝယ်လိုအားမရှိခြင်းရထားမိန်းမတို့အဘို့ခွဲဝေခဲ့ကြသည်ဖျက်သိမ်းခဲ့သည်မှဖျက်သိမ်းခံခဲ့ရသည်။ အင်ဒိုနီးရှားမီးရထားကုမ္ပဏီအရာရှိများသာတစ်နှစ်မိန်းမတို့အဘို့ခွဲဝေရထား၏အဖွင့်အပြီးကြေညာချက်တွင်ဖော်ပြထားသည် [ပို ... ]
Yenikapı'danသောအရာကို Omer ကဂိတ်များ Radical ဖြစ်ပျက်နေသည်သစ်ကိုထိတ်လန့်သောနေ့ရက်ကိုဖတ်ပါလျော့ကျစေပါတယ်တဲ့သတင်းရှိခဲ့သည်: အ Marmaray အတွက်မြေအောက်ရထား၏ဆောက်လုပ်ရေးအတွက်စေ့စပ်ကုမ္ပဏီများ, ရှေးဟောင်းသုတေသနပညာရှင်တွေသူတို့Yenikapı'danအတွက်နှစ်ပေါင်းတူးရှိရာဒေသများသို့တစ်ဦးကရိန်းထဲသို့ဝင်ပေမယ့်ရိန်းကျော်ဖြုတ်ချခြင်းနှင့်ထိပ်တန်းခြောက်လရှေးဟောင်းသုတေသနက်ဘ်ဆိုက်များသို့ရောက်လာသည် ... [ပို ... ]
ကျောင်းသားများ summerhouse ၏အလွန်သေးငယ်သောရွာ၌ရထားပြတိုက်ကိုခရီးထွက်ခဲ့ဖူးတယ်
ကျောင်းသားများTorbalı'ya2အတွက် operating တစ် summerhouse ပုဂ္ဂလိကကျောင်းများ၏အလွန်သေးငယ်သောရွာ၌ရထားပြတိုက်ခရီးထွက်ခဲ့ဖူးတယ်။ တန်းကျောင်းသားများကို Selcuk summerhouse ရွာ၏မြို့မှာရှိတဲ့မီးရထားပြတိုက်ခရီးထွက်ခဲ့ဖူးတယ်။ Atatürkပြတိုက်အသုံးပြုသောရထားကားများတွင်တည်ရှိပြီး, သားသမီးတို့ကလေးစားခရီးထွက်ခဲ့ဖူးတယ်။ [ပို ... ]
အဆိုပါ AKP ခရိုင်ဥက္ကဋ္ဌဟူစိန်တောင်3ကပြောပါတယ်
အဆိုပါ AKP ခရိုင်ဥက္ကဋ္ဌဟူစိန်ကပြောသည် AKP ခရိုင်ဥက္ကဋ္ဌHüseyinGüneyဆောင်ခဲ့သောတောင်ပိုင်း3Alanya မြန်နှုန်းရထားကျနော်တို့အသစ်သောကားလမ်းတည်ဆောက်ကြမည် "ဟုဆိုသည်။ သူတို့ကဆိုပါတယ် Gazipasa-Alanya အတွက်ဒုတိယလေဆိပ် "၏ဆောက်လုပ်ရေးအတွက်မြေယာခွဲဝေမည်ဖြစ်သည်။ 2014 ၏ပါတီ [ပို ... ]
BAŞKENTRAYနု cancel! ပြည်သူ့ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးအာဏာပိုင် (PPA), ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကတူရကီပြည်နယ်မီးရထား၏အထွေထွေညွှန်ကြားမှုအားဖြင့်ထွက်သယ်ဆောင်BAŞKENTRAYစီမံကိန်းအတွက်တင်ဒါများကိုပယ်ဖျက်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ သတင်းအချက်အလက်အရ Genghis ဖက်စပ် Group မှကန့်ကွက် "ဆုံးဖြတ်ချက် ပတ်သက်. AA ကိုသတင်းထောက်, JCC-Makyol လက်ခံရရှိ [ပို ... ]